RAHA TORONTORONINA NY FILANA DIA MITERAKA OTA – filazantsaramada
RAHA TORONTORONINA NY FILANA DIA MITERAKA OTA
Publié parfilazantsaramada	 août 16, 2013 Laisser un commentaire sur RAHA TORONTORONINA NY FILANA DIA MITERAKA OTA
“Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihin’ny filany sy fitahiny izy. Ary ny filana rehefa torontoronina, dia miteraka ota; ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana.” (Jak 1:14-15)
Ny filana dia zava-misy eo amin’ny maha olombelona. Ohatra ny rano dia manana toerana betsaka eo amin’ny tenan’ny olona ka ilainy amin’ny fahavelomana ; toy izany koa ny « sels mineraux » samy hafa toa ny calcium sy magnesium sy potassium… Ilaina ireny amin’ny fahaveloman’ny olombelona. Ny manahirana anefa dia misy ny filan-dratsy, ary ny maha ratsy azy dia izy manimba ny olombelona: ao anatin’izany filana manimba izany ohatra ny rongony izay tsy mahasoa ny olona akory ary mitarika azy hatramin’ny famonoana ny olona tahaka azy ihany. Ao koa ny toaka mitarika fahamamoana, ny fijangajangana izay manimba ny tokan-trano…
Mety mitranaga tampoka eny amin’ny olona ireny filan-dratsy ireny, nefa ny ambaran’izao Tenin’Andriamanitra izao dia raha torontoronina izy dia miteraka ota. Ny atao hoe torontoronina eto dia ny fanomezana azy vahana, azo ambara amin’ny teny hafa hoe omena fahavelomana. Ireny filan-dratsy omen’ny olona toerana ao anatiny ireny dia miteraka ota; Ny ota anefa dia miteraka fahafatesana: miafara amin’ny fahafatesana ara-nofo izany, ary ny loza dia ny fahafatesana ara-panahy izay mahatonga fahaverezana mandrakizay. Ny ota dia mahatonga ny fahatezeran’Andriamanitra, ary raha Andriamanitra no tezitra dia…
Koa raha mety efa notarihin’ny filan-dratsy ary isika, aoka tsy ho torontoronina izany filana ratsy ao anatintsika izany, aoka tsy avelantsika hahazo vahana izany filan-dratsy izany, fa hitarika antsika ho amin’ny fahatezeran’Andriamanitra, ary ho amin’ny fahaverezana mandrakizay!
Hoy ny Apostoly Paoly : « Fa raha ny Fanahy no amonoanareo ny asan’ny tena, dia ho velona ianareo » (Rom 8 : 13b). « Voahombo miaraka amin’i Kristy amin’ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. » (Rom 2 :20). « Fa izay an’i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany sy ny filany tamin’ny hazo fijaliana » (Gal 5 : 24).
NY TOMPO JESOSY HAMPAHERY ANAO!
Publié parfilazantsaramada août 16, 2013 Publié dansUncategorized
Fiaraha-miasa FF/ Lycée Nanisana
NY MPAMPAKATRA SY NY AMPIAKARINA (ANY AN-DANITRA)